आफ्नै खर्चमा कराँते खेल्न बंगलादेश गएका कर्णालीका खेलाडीले ल्याए दुई स्वर्ण « Name of Truth News : News Portal in Nepal
आफ्नै खर्चमा कराँते खेल्न बंगलादेश गएका कर्णालीका खेलाडीले ल्याए दुई स्वर्ण
प्रकाशित मिति : २०७८, पुष, २९, बिहीबार १७:०२
सुर्खेत, २९ पुस
बंगलादेशमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण कराँते प्रतियोगितामा कर्णाली प्रदेशका खेलाडीले दुई स्वर्ण पदक जितेका छन् । बंगलादेश गोजुरियो कराँते डाे संघको आयोजनामा २६ देखि २९ डिसेम्बरसम्म चलेको बि.जी. अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण प्रतियोगितामा सहभागि कर्णालीका खेलाडीले दुई स्वर्ण र दुई काँस्य पदक जितेका हुन् ।
प्रतियोगितामा सुर्खेतका प्रकाश खड्काले एकल कातामा स्वर्ण र ७५ केजी कुमितेमा काँस्य पदक जितेका थिए । यस्तै, दैलेखका हिक्मत रोका मगरले ६५ केजी. कुमितेमा एक स्वर्ण र सुर्खेतका सन्दीप महतले ७० केजी. कुमितेमा काँस्य पदक जितेका थिए ।
निजी खर्चमा बंगलादेश पुगेका सुर्खेतका दुई र दैलेखका एक खेलाडीले पदक जितेर फर्केको जिल्ला खेलकुद विकास समिति सुर्खेतले जनाएको छ । जिल्ला गोजुरियो कराँते संघ सुर्खेतले बुधबार विजेता खेलाडीहरूलाई सम्मान गरेको छ । साे अवसरमा सरोकारवाला निकायसँग कर्णालीका खेडालीको उनीहरूकाे खर्चसिहतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइने खेलकुद विकास समिति सुर्खेतका अध्यक्ष चन्द्रकुमार गिरीले बताए ।
नेपाल कराँते महासंघ कर्णाली प्रदेशका टेक्निकल कमिटीका अध्यक्ष प्रदीपकुमार राईले आफ्नै खर्चबाट पदक जितेर राष्ट्रको शान र कर्णालीको गौरव बढाएकोमा खेलाडीलाई बधाई दिँदै यसमा प्रदेश सरकार पनि जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए ।
बागमती प्रदेशलाई पराजित गर्दै पुलिस पीएम कपको फाइनलमा
सहकारीबाट ठगिँदै जुम्लाका नागरिक
च्यासल युथ क्लबका १९ खेलाडीलाई कोरोना, पुलिसविरुद्धको खेल स्थगित
नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत रुकुमपश्चिमबाट एक सुत्केरीको उद्धार
प्रकाशित मिति : २०७८, माघ, ४, मंगलवार १९:०८
सुर्खेत, ४ माघ
जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका निवासी एक सुत्केरी महिलाको मंगलबार नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ ।
कुशे गाउँपालिका–५ निवासी २५ वर्षीय सरस्वती रावलको रुकुमपश्चिमको चौरजहारी अस्पतालबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत सुर्खेत ल्याइएको हो ।
स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा दुई वटा जुम्ल्याहा छोराको जन्म दिएकी रावललाई सुत्केरीपछिको रक्तअल्पता भएपछि गत पुस २९ गते रुकुमपश्चिमको चौरजहारी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।
शिशु जन्मेको १४ दिनपछि अस्पतालमा भर्ना भएकी रावलको शरीरमा कडाखालको रक्तअल्पता भएकोले चौरजहारी अस्पतालले सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजान बिरामीका आफन्तलाई दिएको सल्लाह अनुसार सुर्खेत ल्याइएको उनका श्रीमान् धन बहादुर रावलले जानकारी दिए ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन शाखा काठमाडौंले सुत्केरी महिलाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरेको हो । सुत्केरी महिलाका २ जुम्ल्याहा छोरा घरमा नै सामान्य अवस्थामा रहेको पारिवारिक उनका श्रीमानले बताए ।
प्रकाशित मिति : २०७८, माघ, ४, मंगलवार १३:०८
विभागिय टोली नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री (पीएम) कप टी-२० राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
मंगलबार कीर्तिपुरस्थित टियु क्रिकेट मैदानमा भएको पहिलो सेमिफाइनलमा बागमती प्रदेशलाई ५० रनले पराजित गर्दै पुलिस उपाधि नजिक पुगेको हो ।
जितका लागि १५६ रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती निर्धारित २० ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै १०५ रनमा सीमित भयो । बागमतीका आदिल खानले सर्वाधिक २७ रन बनाए । यस्तै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले २३ रनको योगदान गरे ।
पुलिसका दीपेन्द्रसिंह ऐरीले सर्वाधिक पाँच विकेट लिए । चार ओभर बलिङ गरेका दीपेन्द्रले १० रन खर्चिए । यस्तै सागर ढकालले दुई तथा आरिफ शेखले एक विकेट लिए ।
यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित २० ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर १५५ रनको विजय लक्ष्य प्रस्तुत गर्‍यो । पुलिसका ओपनर पवन सर्राफले अर्धशतकीय इनिङ खेले । पवनले ५४ बलमा तीन चौका र तीन छक्काको मद्दतमा ५९ रन बनाए । यस्तै दिलीप नाथले ३१ रन जोड्दा अनिल साहले २५ रन बनाए ।
बागमतीका नन्दन यादव र रिजन ढकालले समान दुई/दुई विकेट लिँदा प्रतिस जिसीले एक विकेट लिए । दोस्रो सेमिफाइनलमा एपीएफ र आर्मी भिड्नेछन् ।
प्रकाशित मिति : २०७८, माघ, २, आईतवार १७:३८
जुम्ला, २ माघ
जुम्लामा सञ्चालित सहकारीले ठगिगरेका पाइएको छ । सहकारीका नाममा बचत उठाएर सम्पर्कविहीन भएपछि जुम्लाका नागरिक ठगिएका हुन् ।
नागरिक बचतकर्ता रुपमा सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीबाटै ठगिँदै आएका छन । चन्दननाथ नगरपालिका–१० गैरागाउँका प्रेमराज न्यौपाने सहकारीका बचतकर्ता हुन् । उनले स्वजन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका बचत गरेका थिए ।
उनी त्यो सहकारीमा अबद्ध दैनिक बचतकर्ता छन् । उनको त्यो सहकारीमा ३० हजार ५०० बचत पुगेको छ । जुम्लाको बसपार्कमा अवस्थित स्वजन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका बचतकर्ता न्यौपाने मात्र होइन । चन्दननाथ नगरपालिका–६ की हरिदेवी बुढा पनि बचतकर्ता हुन् । उनको बचत ९०० मात्र छ । ‘महिले स्वजन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले चार हजार सेयर लगानी गर्न लागाएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले आफ्नो घर खर्च कटाएर गरेको बचत सहकारीले वालुवा पानी खन्याए जस्तै गरिदियो ।’
सो सहकारी संस्था करिब ५०० व्यापारीले बचत गरेका छन् । सहकारीले बचत उठाउन छोडेर भागेको एक वर्ष जति भयो । यसको प्रमुख संञ्चालक चन्दननाथ १० गैरागाउँका जनक हमाल हुन् । सहकारीको कार्यालय पनि बन्द छ ।
कतिपय नागरिकले दुई लाखसम्मको बचत गरेका छन । उनीहरुको पासबुकसमेत ब्याज हालिदिने भन्दै सहकारीले नै लिएको छ ।
त्यस्तै जुम्लाको बसपार्कमा संञ्चालित अर्को सहाकरी हो, समाज रुपान्तरण । समाज रुपान्तरण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था पनि नागरिकको बचत लिएर सम्पर्कविहीन भएको पाइएको छ । समाज रुपान्तरण बहुउद्देश्यीय सहकारीमा पनि ४०० को हाराहारीमा बचतकर्ता आबद्ध छन् । यी सबै नागरिक सहकारीले ठगेको भन्दै हारगुहार गर्दै आएका छन् ।
समाज रुपान्तरण बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचतको नामा जुम्लाका नागरिकलाई गठेको चन्नदननाथ–६ कि एकुमाया खत्रीले बताइन् । उनले भन्निन्, ‘म यसको बचतकर्ता हुँ, मेरो यस सहकारीमा १५ हजार ३०० रुपैया बचत छ ।’ खत्रीका अनुसार यस सहकारीमा न्यूनतम पाँच हजारदेखि अधिकतम तीन लाखभन्दा बढी बचत गरेका नागरिक छन् ।
अध्यक्ष चन्दननाथका–८ तलिमका प्रकाश रोकायासहित सहकारीका पदाधिकारी भोजराज न्यौपाने, मंगलादेवी बोहोरा, रेशम शाही र सर्पजित बुढागत १२ असोजदेखि सम्पर्कविहीन छन् ।
त्यस्तै समाज रुपान्तरण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको पनि अवस्ता उस्तै छ । समाजरुपान्तरण सहकारीका अध्यक्ष प्रकाश रोकायाका अनुसार यसअघि भोजराज न्यौपाने अध्यक्ष रहेका र आफू अध्यक्ष भएको दुइ महिनामै काम विषेशले काठमाडौँ आएको र त्यसपछि सहकारीनै बन्द भएको छ ।
नागरिकको सात लाखसम्म बचत फिर्दा गर्नुपर्ने रहेकोउनले स्वीकारे ।
‘यहि माघदेखि फगुनसम्म नागरिको बचत फिर्दा गर्नेछु । सहकारीले १२ लाख जति ऋण पनि लगानी गरेको छ । त्यही ऋण असुल गरेर बचत फिर्ता गर्छु,’ उनले भने ।
यता जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईंले ठगी गरेको उजुरी आएको खण्डमा कनुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइन् ।